HD80N म्यानुअल ड्रम लिफ्ट ट्रक, ड्रम वितरक ह्यान्डलिंग - Iliftequip.com
यो HD80N (HD80A) म्यानुअल ड्रम लिफ्ट ट्रक बढ्छ, ट्रान्सपोर्ट गर्दछ, घुमाउँछ, टिल्ट्स र नाली पूर्ण रूपले लोड ड्रमहरू। यो ड्रम को पूरा वजन बोक्छ। दोहोरो, औंलाटिप संचालित लकले उठाएको ड्रम सुरक्षित गर्‍यो। यसले नलको माध्यमबाट पानी निकाल्नको लागि स्पिल वा तेर्सो स्थितिबाट बच्न ठाडो स्थितिमा ड्रम लक गर्न सक्दछ। जब अनलक हुन्छ, ड्रमले अन्त्यमा-अन्त-अन्त्यलाई उत्प्रेरित गर्न सामग्री बदल्न सक्छन् वा इipped्गितमा टिप गरिएको र म्यानुअल तरिकाले समातिन्छ। त्यसैले यो श्रृंखला ड्रम मूभर वा ड्रम वितरकको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो सार्न धेरै सरल छ र यसको 8 "पॉलीयुरेथेन रोलर बेयरिंग व्हील्स र 4" कुंडा कास्टरमा स्टियर गर्न।
i-Lift No 1710902
क्षमता किलो (lb।)4364/880०, स्टिल ड्रम
ड्रम आकार 572 Dia.210 लिटर (55 गैलन), 915.5 उच्च
नेट वजन किलो (lb।) 50(110)
१. कम्बाइन्ड कैरी, फ्लिप, र एकमा तेल खन्याउनुहोस्, साधारण अपरेशन।
२. बायाँ र दायाँ लक गर्ने पुल रिले तेल ड्रमलाई क्षैतिज वा ठाडो स्थितिमा लक गर्न सक्दछ डम्पि or वा स्थिति सहज पार्न।
The. लकि ring घण्टी जारी गर्दा, तेल ड्रम हलचल वा पनि सामग्री गर्न सकियो
H.HD80 55 गैलन स्टिल तेल ड्रम अपरेट गर्न प्रयोग गरिन्छ
★ क्ल्याम्पि:: फ्ल्याट जमिनमा तेल ड्रम खडा गर्नुहोस्, र ट्रमको क्ल्याम्पि bag ब्यागको मोडको घण्टीलाई तेल ड्रममा बन्द गर्नुहोस्।
Ifting उठाने: लिफ्टिंगको उद्देश्य प्राप्त गर्न म्यानुअल रूपमा ह्यान्डल तान्नुहोस्।
Osition स्थिति: तेल ट्यांक ट्रक फ्रेमको बायाँ स्तम्भमा एक स्क्रू लक उपकरण छ
Ip फ्लिप: सामग्री फ्लिपिंगको उद्देश्य प्राप्त गर्न म्यानुअल रूपमा तेल ब्यारेल फ्लिप गर्नुहोस्।
Igh तौल: यदि तपाईंलाई एक भारी बाल्टिन तौल गर्न आवश्यक छ भने, तपाईं मात्र यसलाई लिफ्टिंग र स्थिति को राज्य मा पैमाने मा पुश गर्न आवश्यक छ।
म्यानुअल ड्रम लिफ्ट ट्रकको संचालन
१. क्ल्याम्पि dr ड्रम
मोबाइल हुप सामान्यतया वसन्तले समर्थन गरेको कारणले खोल्दछ। यसले ड्रम स्वीकार्न मद्दत गर्दछ। मोबाइल क्यारियरलाई ड्रमको नजीक पार्नुहोस् जुन उठाइन्छ। स्थान लिभरहरू तान्नका लागि, ड्रमको बिचमा समर्थन हुप पत्ता लगाउन ह्यान्डललाई घुमाउनुहोस्। यस उपयुक्त स्थानमा ह्यान्डल लक गर्न स्थान लिभरहरू रिलीज गर्नुहोस्। यसका दाँतलाई माथितिर बनाउनका लागि लिभर काउन्टर-क्लक्स्वाइज गर्नुहोस्। श्रृंखला बन्धन र बन्धन लीभरमा ग्रूवमा चेन घुसाउनुहोस्। त्यसपछि लीवरलाई घडीको दिशामा चाँडै घुमाउनुहोस् चेन एम्बेड ड्रम बनाउनका लागि। कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि फास्टनिंग लिभर स्थिर रूपमा पावेल द्वारा लक गरिएको छ।
२. उठाउने ड्रम
ह्यान्डल थिच्नुहोस् र ड्रम हटाइनेछ। जब ड्रमलाई आवश्यक स्थितिमा उचालिन्छ, ह्यान्डल छोड्नुहोस् र ड्रम लक हुनेछ।
मोबाइल-क्यारियर यसमा सार्न ह्यान्डललाई पुश / ह्याल गर्नुहोस् गन्तव्य। (निस्सन्देह, आवश्यक भएमा, अपरेटरले मोबाइल-करियरको गतिशील दिशा बदल्न ह्याण्डललाई परिवर्तन गर्न सक्दछ।)
Lower. ड्रमलाई कम र रिलीज गर्नुहोस्
थोरै ह्यान्डल थिच्नुहोस्, र एकै समयमा स्थान लिभर तान्नुहोस्। त्यसपछि बिस्तारै ह्यान्डललाई माथि लिनुहोस् ताकि ड्रम कम गर्नुहोस्। जब ड्रम फर्म सतहमा पुग्छ स्थान लीभरहरू छोड्दछ।
फास्टि le लीभरलाई घडीको दिशामा अलिकता घुमाउनुहोस् ताकि प्याल डिसनेज हुन्छ। फास्टनिंग लीभर रिलिज गर्नुहोस्। बन्धन लीभरमा ग्रुउ बाहिर चेन लिनुहोस् र यसलाई हुकमा झुण्ड्याउनुहोस्। मोबाइल क्यारियर टाढा सार्नुहोस्।
The. ड्रम घुमाउनुहोस्
मोबाइल क्यारियर वास्तविक मांग अनुसार ड्रम ठाडो बाट तेर्सो स्थिति मा घुमाउन सक्दछ। अपरेशन निम्नानुसार गर्नुहोस्। स्थान पिन डिसनेज गर्नुहोस् र यसै बीचमा ड्रमलाई हातले ° ०। बाट बदल्नुहोस्।
स्थान पिन खोल्नुहोस् ताकि ती समान छिद्रहरूमा सम्मिलित गर्न क्षैतिज स्थितिमा ड्रम लक गर्न।
नोट: ड्रम घुमाउनु भन्दा पहिले, ह्याण्डल (भाग न। Part) लाई प्रेस / लिफ्ट गर्नुहोस् यदि ड्रमले जमिनमा दिक्क लगायो भने उचित उचाइ।
यदि समर्थन हुप ड्रमको बीचैमा पकड गर्न अत्यन्त उच्च छ भने ह्यान्डल यसको अधिकतममा लिइन्छ। उचाई, यो ह्यान्डलमा अर्को उपयुक्त प्वाल छनौट गर्न आवश्यक छ। यदि ड्रम आवश्यक उचाइमा लिन सकीदैन भने ह्यान्डल थिच्दा यसको मिनेटमा पुग्न सकिन्छ। उचाई, यो लिफ्टिंग हात मा अर्को उचित प्वाल छनौट गर्न आवश्यक छ। स्थान लिभर्स तान्नुहोस् र बिस्तारै ह्यान्डल उठाउनुहोस् ता कि ड्रमलाई कम गर्नुहोस्। जब ड्रम फर्म सतहमा पुग्छ साना लीभरहरू जारी गर्दछ। चेन हटाउनुहोस् र मोबाइल-क्यारियर ड्रमबाट टाढा सार्नुहोस्।